Muxuu ka yiri Edinson Cavani wararka la xiriirinaya Neymar Jr inuu ka tagayo PSG? – Gool FM
Muxuu ka yiri Edinson Cavani wararka la xiriirinaya Neymar Jr inuu ka tagayo PSG?
(Paris) 03 Agoosto 2019. Weeraryahanka reer Uruguay iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Edinson Cavani ayaa sheegay inay jirto waxyaabo badan uu Neymar Jr ugu deeqi karo kubbadda cagta Faransiiska, isagoo dhinaca kale rajeeyay inuu sii joogo garoonka Parc des Princes, iyadoo ay jiraan warar xaqiijinaya in ciyaaryahanka reer Brazil uu doonayo inuu baxo.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu soo bandhigay wareysi uu bixiyay Edinson Cavani waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Aad ayaan u qadariyaa Neymar Jr, waa wiil qalbi wanaagsan, waxaan rajeynayaa in wax walba oo dhacay ay u kordhin doonto khibrad shaqsi ahaaneed”.
“Waxaan u maleynayaa inuu weli haysto wax badan uu siin karo kooxdan, dabcan Haa, waxaan doonayaa inuu sii joogo Paris Saint-Germain, maxaa yeelay la ciyaarista ciyaartoy waa weyn sida isaga iyo Kylian Mbappé waa wax lagu farxo, waana wax aad u wanaagsan in wixii xiligan ka dambeeya la helo xiriir wanaagsan oo inaga dhexeeya”.
“Anigu ma ihi qof doonaya inuu u talo celiyo Neymar Jr, laakiin qof walba wuxuu samaynayaa khaladaad wuxuuna wax ka baranayaa khaladaadkaas”.
Intaas kaddib Edinson Cavani ayaa wuxuu ka hadlay sida uu yahay xiriirka ka dhexeeya isaga iyo Neymar Jr wuxuuna yiri:
“Wax badan ayaa laga hadlay oo nagu saabsan, dabcan waxay u muuqataa inuu jiray khilaaf ina dhex maray kaddib markii uu kooxda yimid, laakiin wey fiican tahay inaan wada hadalno labadeena, waxyaabo badan ee lagu sheegay baraha bulshada ma ahan wax run ah”.
Si kastaba ha noqotee, Neymar Jr ayaa heshiiska uu ku joogo kooxda Paris Saint-Germain wuxuu gaarayaa ilaa iyo 2022, iyadoo laga war qabo in heshiiska uu kaga soo dhaqaaqay Barcelona uu ku kacay adduun dhan 222 milyan euro laba xili ciyaareed kahor.
Kooxda Inter Milan oo dib markale u soo celisay isku dayga ay ku dooneyso Lukaku
Liiska xiddigaha ugu fiicnaa taariikhda kubadda cagta addunka 25-kii sano ee lasoo dhaafay... (Ka boggo 10-ka sare)